Bit By Bit - समीक्षा खुला
डिजिटल युग मा सामाजिक अनुसन्धान: तपाईं बिट द्वारा बिट को ओपन समीक्षा भाग छन्। खुला समीक्षा अवधिमा तपाईं पुस्तक पढ्न र यसलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तपाईँले प्रयोग बनाउन एनोटेशन द्वारा सुझाव प्रस्ताव hypothes.is , एक खुला स्रोत एनोटेशन प्रणाली। यसबाहेक, वेबसाइट पुस्तकको प्रत्येक खण्ड को readership र परित्याग दर ट्रयाक गरेर आफ्नो निहित प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिनेछ।
यो पुस्तक प्रकाशक, प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय प्रेस, साथीहरूको समीक्षा सञ्चालन हुँदा खुला समीक्षा हुनेछ। खुला समीक्षा र साथीहरूको समीक्षा देखि प्रतिक्रिया एक संशोधित पांडुलिपि सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने छ। अन्तिम पांडुलिपि प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय प्रेस, शायद नोभेम्बर 2016 मा हुने पेश जब समीक्षा अवधिमा खुला समाप्त हुनेछ।
खुला समीक्षा बारेमा सोधिने प्रश्न
तपाईं प्रतिक्रिया कस्तो देख रहे हो?
समीक्षा खुला बस Typos का पक्रने बारेमा छैन। बरु, समीक्षा खुला प्रतिक्रिया को सबै प्रकार संकलन गर्न डिजाइन गरिएको छ, र म विशेष तपाईं पुस्तकको पदार्थ बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया स्वागत चाहन्छु। तपाईं विशेष भ्रामक भनेर खण्डहरू छन्? तपाईं महत्वपूर्ण भनेर आफ्नो अंक हुनुहुन्छ? म दावा तपाईं परिष्कृत गर्न आवश्यक विचारमा गर्दैछु? त्यहाँ तपाईंलाई लाग्छ कि हटाइनु पर्छ पुस्तकको भागहरु हुनुहुन्छ? पक्कै मा, म तपाईं विकिपीडिया मा मुख्य सिद्धान्तहरू एक पालना गर्नुपर्छ लाग्छ कहिले: साहसी ।
म अरूलाई बनाउन छन् भनेर एनोटेशन हेर्न सक्नुहुन्छ?
हो, सबै एनोटेशन सार्वजनिक छन्। तपाईं प्रत्येक पृष्ठ को दायाँपट्टी देख्ने वा तपाईंले उनीहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ धारा फारम ।
पाठकहरूका लागि फाइदा के-के हुन्?
तपाईं पांडुलिपि पढ्न र यसलाई अझ राम्रो बनाउन मदत प्राप्त।
लेखक र प्रकाशक लागि फाइदा के-के हुन्?
समीक्षा प्रक्रिया खुला तिनीहरूले ज्ञान पहुँच वृद्धि मा कुनै चासो छैन भने पनि, लेखक र प्रकाशक दुवै लाभ हुनेछ। यो प्रक्रिया स्पष्ट र निहित प्रतिक्रिया मार्फत उच्च पांडुलिपि गुणस्तर नेतृत्व गर्नेछन्। यसबाहेक, समीक्षा प्रक्रिया खुला किताबको कि मार्केटिङ समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बहुमूल्य डाटा प्रदान गर्नेछ।
निर्माण प्रक्रिया यो वेबसाइट लागि के हो?
हामी भविष्यमा बारेमा पूर्ण ब्लग पोस्ट गर्नेछ। अब को लागि, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोड थप पढ्नुहोस् ।
कसैले कहिल्यै अघि यो जस्तै केहि गर्नुभएको छ?
म तिनीहरू भन्ने निश्चित छु। यहाँ म सुनेका छौं कि केही केहि समान परियोजनाहरू छन्:
Hadley Wickham हुनत म उसलाई देखेको कहिल्यै गर्नुभएको यो बारे केहि लेख्न, खुला मा पूर्ण आफ्नो पुस्तकहरु केही विकास गर्न देखिन्छ।
लरेन्स Lessig गरेको कोड 2.0 विकि मा भाग मा लेखिएको थियो।
साँच्चै यो प्रयास गर्न मलाई प्रेरित एउटा पुस्तक माइकल नीलसन पुस्तकका छ Reinventing आविष्कार । र, यो उहाँले राख्दै छ जस्तो देखिन्छ गहिरो सिक्ने मा आफ्नो नयाँ पुस्तक यस्तै प्रक्रिया मार्फत।
Kathleen Fitzpatrick उनको पुस्तक यस्तै कुरा गरे प्रकाशन, प्रौद्योगिकी र एकेडेमी को भविष्य: योजना अप्रचलन ।
त्यहाँ म सम्झना गर्नुभएको अन्य सम्बन्धित परियोजनाहरू छन् भने, कृपया हामीलाई थाहा र हामी लिंक थप्न छौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@bitbybitbook.com ।
जानकारी कस्तो तपाईं सङ्कलन छन् र जानकारी कसरी प्रयोग गरिनेछ?
कृपया हाम्रो पढ्न गोपनीयता र सहमति नीति ।
म शैक्षिक किताबहरु को परम्परागत साथीहरूको समीक्षा बारेमा थप कसरी सिक्न सक्छौं?
हालै AAUP मा एक रिपोर्ट प्रकाशित साथीहरूको समीक्षा लागि सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू ।
म मेरो पुस्तक यो काम गर्न सक्नुहुन्छ?
निश्चित। बाहिर जाँच कोड खण्ड बारेमा हामी यसलाई गरे कसरी थप लागि यो वेबसाइट को।
म खुला समीक्षा बारेमा फरक प्रश्न छ। म सम्पर्कमा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्?
ईमेल पठाउनुहोस् info@bitbybitbook.com ।